Toerana fiasa any Etazonia
Tany sy trano lehibe noheverina ho fananana. Ity fampiasana ity dia nipoitra avy amin'ny tompona fananana nahita ny teny tao amin'ny [lohatenin'ny lohateniny] s, izay tany am-boalohany dia midika hoe "ilay voalaza etsy ambony; inona ny momba an'io antontan-taratasy io", avy amin'ny [Latin] prae-missus = "napetraka talohan'ny". Amin'io dikany io, ny teny dia ampiasaina foana amin'ny endrika manonona, fa ny fananganana azy. Marihina fa trano tokana na fananana tokana hafa dia "toeram-ponenana", fa tsy "premise", na dia mahery setra ny teny hoe "premier"; ohatra "Eo amin'ny tanin'ny mpanjifa ny fitaovana", tsy "avotra amin'ny lohan'ny mpanjifa ny fitaovana".